Ungazilanda kuphi izifanekiso ze-PowerPoint eziyi-100 + | Iforamu Yeselula
Ungazilanda kuphi izifanekiso zamahhala ze-PowerPoint eziyi-100
IPowerPoint ibilapha nathi iminyaka eminingi, eminingi ukusindisa izethulo zethu. Futhi ukuthi into ebisebenza njengomkhiqizo iminyaka eminingi kangaka yingoba into ethile yenza kahle uma kukhulunywa ngomsebenzi wayo. Kuze kube namuhla futhi kusukela lapho iWindows igcine izwi layo lokuguqula izethulo ngalolu hlelo, empeleni iHhovisi kanjalo ne-suite yayo yokudala isinikeze okuningi. Ezimweni eziningi besingeke siyiqonde ngisho ne-pc ngaphandle kokuthi kufakwe iHhovisi. Siyazi ukuthi iPowerPoint ibaluleke kakhulu kuwe futhi kulokhu sibhale le ndatshana nayo Izifanekiso zamahhala ze-Powerpoint.
Ngoba sobabili mina nawe siyazi ukuthi uma wenza isethulo ngesifanekiso esifanayo kaninginingi, ekugcineni ugcina udina wonke umuntu ozoyibona nsuku zonke noma lapho idlala. Ngalesi sizathu futhi ngoba nsuku zonke ama-ppts kufanele abukeke ngokwengeziwe, abhalwe kangcono futhi ahlanganiswe ngokwengeziwe, udinga ukuvuselela ngokubonakalayo ukuze wenze umthelela. Ekupheleni kosuku, iminyaka idlula futhi siyaguquka, futhi kuyiqiniso ukuthi eminyakeni engama-20 edlule ama-ppts ayesuselwa kwimibhalo emide, kepha manje emphakathini wethu (umhleli ukutshela) okubukwayo kuyanqoba. Yingakho udinga izifanekiso ezintsha zamahhala ze-PowerPoint futhi yilokho esizokunika khona, izindawo zokuzilanda ngaphandle kwenkinga. Ake siye lapho nohlu.
1 Amawebhusayithi ahamba phambili wokulanda izifanekiso zamahhala ze-PowerPoint
1.1 Amaslayidi omkhosi
1.2 UMama Wezithombe
Amawebhusayithi ahamba phambili wokulanda izifanekiso zamahhala ze-PowerPoint
Into enhle ongayenza ngaphambi kokuchitha amahora namahora uhlela ithempulethi yakho ukulanda eyodwa. Ngeke uchithe umzuzwana kukho, kepha lokho kubandakanya nokuthi ungakhi isu elibonakalayo nelomfanekiso elinomthelela. Yishiye kwabanye ukuba badle izifanekiso zakho ezakha ikhanda, ukuthi uma nazo zibashiyela kithi mahhala nokuzilanda, zingcono kunokungcono. Ukukusiza ngalokhu, sizokubeka ngezansi kwamanani amaningi wewebhu ngalolu hlobo lokuqukethwe. Kwezinye izimo, ungaba nezifanekiso eziningi zamahhala nakuwebhusayithi efanayo uzothola ezinye ezikhokhelwayo. Ngokubona kwakho kuhlala kunjalo, kepha uma kuyinto ebalulekile sincoma ukuthi utshale imali emsebenzini wakho.
Ungayifaka kanjani ividiyo ku-PowerPoint ngqo
Nge-SlidesCarnival uzothola eyodwa Umthombo omuhle wokhuthazo futhi ikakhulukazi ulanda izifanekiso zamatimu ahlukahlukene. Iwebhusayithi ephelele ngokuphelele yale njongo. Ungathola izifanekiso ezihlukile ngendikimba, isitayela, umbala, okuqukethwe, ungasesha ngisho nezifanekiso zokuqalisa. Okuthile okuthakazelisa kakhulu, kepha kuphelele impela, empeleni.
Ukuze ukwazi ukulanda lezi zifanekiso ze-PowerPoint mahhala, ngeke uhlupheke kakhulu. Kuzodingeka ukhethe kuphela uma ufuna isifanekiso se-Google Amaslayidi noma i-PowerPoint (Ngaphambi kokuthi ukhethe eyodwa, ngeke kube lula ngabo bonke abanabo) futhi ngemuva kwalokho, izolanda. Manje okumele ukwenze nje ukuyivula ngohlelo okukhulunywa ngalo futhi ukusuka lapho, qala ukwakha nokuhlela ngentando yakho ukwenza isethulo esihle kakhulu esizomangaza amaklayenti akho, abangane, abafundi noma omunye umuntu ohlobene naso. .
Le webhusayithi yaziwa kahle ngokushicilela imidwebo yokuqamba imidwebo yabadizayina. Isibonelo, kuyindawo yokuya ugqozi, ama-vectors, ama-tutorials, izitayela, imifanekiso, kanye phakathi kwezinye izinto eziningi, izifanekiso ze-PowerPoint nama-Google Amaslayidi. Kule webhusayithi ngeke udinge ukukhokha noma yikuphi ukubhalisa, ukubhalisa nje kuzokwanela. Kuyiqiniso ukuthi sincoma amaSlidesCarnival amaningi kakhulu kusukela ku-GraphicMama uzothola izifanekiso eziningi ze-Google Amaslayidi kune-PowerPoint.
Kunoma ikuphi, uma ubona ukuthi awutholi eziningi, zihlala zikunikeza inketho yokulanda ithempulethi ngaleyo ndlela. Kunoma ikuphi iwebhusayithi i-English noma kungeyona inkinga enkulu ngoba isikhombimsebenzisi sayo silula futhi siyisisekelo futhi ukuzulazula kulula kakhulu futhi kuyinkimbinkimbi.
ICanva ingelinye lamawebhusayithi athandwa kakhulu emhlabeni kuwo wonke amathuluzi nezinsizakusebenza zawo zemidwebo. Kuwebhusayithi ebikade iku-inthanethi kusukela ngo-2012 kunezinhlobo zonke zamafayela: yezokuxhumana, i-cv, izikhangiso, amafomethi wesikhulumi, izethulo ze-PowerPoint, amakhadi ebhizinisi nohlu olude lwamafomethi nemiklamo engakumangaza.
Ngenxa yamakhasi afana ne-Canva, i-graphic design ezingeni le-amateur (ungalokothi udide umklami we-graphic wangempela, osebenzisa amathuluzi afana ne-Illustrator noma i-Photoshop) usetholakalela umphakathi jikelele ongenayo imibono yokuklama. Ekugcineni, imishini yekhasi ilula kakhulu ngoba uzokwazi ukuhlela konke kusuka kuwebhu uqobo ukuhudula, ukukhulisa nokunye kokuthintwa kane kwento.
Kule webhusayithi, sikutshela kanjani? uzokwazi ukuthola izifanekiso zamahhala ze-PowerPoint ongazilanda, futhi neze-Google Slides Kunoma ikuphi, ungenza ngisho nokwethulwa ku-Canva uqobo uma kwenzeka okuthile kuwe ngephakeji lakho le-Office noma nge-PowerPoint. Eqinisweni, ungafaka iwebhu kusuka kunoma iyiphi idivayisi ngoba ishintshwe ngokuphelele.
KuVisme uzothola izifanekiso ezingaphezu kweziyi-900 ezenziwe ngokwezifiso zezifanekiso ze-PowerPoint. Futhi futhi enye yezinto ezinhle ukuthi ihlukanisa zonke ngendikimba, okungukuthi, uma udinga ukwenza i-ppt yamakhasimende noma ukumaketha Uzothola izitayela ezithile zemidwebo abakholelwa ukuthi zilulungele kahle lolo hlobo lwesethulo esibucayi futhi esisemthethweni ngaphandle kokulahlekelwa ukuthinta kokudala.
KuVisme uzokwazi ukuthola izinketho ezanele zokukwazi ukwenza zonke izethulo emhlabeni. Ngoba uma sikuthembise okuthile, beziyizifanekiso zamahhala ze-Powerpoint, futhi yilokho esikulethela kona, empeleni ngaphezu kuka-900 kuwebhusayithi eyodwa. Ungathola enye ithempulethi ye-premium kepha njengoba sikutshela akekho umuntu okusa kude ukuze uphefumulelwe ngakho futhi uzidalele ngokwakho ku-PowerPoint. Eqinisweni, kungaba inketho enconywe kakhulu futhi kungathatha kuphela imizuzu embalwa uma unekhono nohlelo.
Siyethemba ukuthi le ndatshana ibilusizo kuwe nokuthi kusukela manje uzomangaza wonke umuntu ngezethulo ezintsha ezivumelaniswe nezidingo zezithameli zakho. Sizokubona ku-athikili elandelayo ye-Android Guides.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Ukushintshwa kwehhovisi » I-Microsoft PowerPoint » Ungazilanda kuphi izifanekiso zamahhala ze-PowerPoint eziyi-100
Ezinye izindlela eziyi-8 zamahhala zePaint for Mac